Maxaa Cusub – Page 48 – Shabakadda Amiirnuur
Maraykanka oo in ku dhaw 20 qof rayid ah ku dilay Afghaanistaan.
Wadanka Afgaanistaan waxaa wali ka socda xasuuqa ka dhanka ah dadka Muslimiinta ah oo ay gaysanayaan ciidamada Maraykanka ee ku jabay duulaanka gardarada ah ee lagu qaaday dalkaasi. Duqeymo ay fuliyeen diyaaraddaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan “Drones” ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday Labaatan ruux oo kamid […]
Waxaa soo gaba gaboobay kulan ballaaran oo dhax maray qaar kamid ah odayaashii soo xulay Xildhibaannada Baarlamaanka Dowladda Federaalka iyo mas’uuliyiin katirsan Xarakada Al Shabaab. Odayaashan oo towbadkeenayaal ahaa ayaa ka tagay deegaannada ay ka arrimiyaan maamullada Hirshabelle iyo Galmudug waxayna gaareen wilaayaatka Islaamiga ah ee dhaca bartamaha Soomaaliya, kulamadan […]
Dhageyso:Muxaadaro Tobanka Maalmood ee Ugu Kheyrka Badan Maalmaha Alle Waxaa Jeedinaya Sheekh Abuu Muslim.
Bisha Dul xaj oo ah Bil Fadli Badan waxaa kujira Maalmo gaar ah oo ah kuwa ugu fadli badan maalmaha alle muslimiinta siiyay. Marka laga hadlo maalmo majirto maalmo ka kheyr badan 10-ka bisha carafo balse marka laga hadlayo habeen waxaa ugu fadli badan leylatul qadriga oo u dhigma wax […]
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Lagu Soo Qaatay Mowduuc Muhim Ah.
DEG-DEG: Cabdi-raxmaan Yiriisow oo u dhintay Dhaawicii weerarkii Xarunta gobolka Banaadir.
Cabdi-raxmaan Yiriisow oo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa u geeriyooday dhaawac halis ah oo kasoo gaaray weerar dhawaan ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Yiriisow oo lagu dabiibayay isbitaal ku yaala wadanka Qadar, oo dhawaan loo qaaday markii xaaladiisa wax looga qaban waayay Soomaaliya ayaa si toos […]
Waxaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshadu ku xiriirto lagu daabacay warar been abuur ah oo lagu sheegayay in duqaymo dhowr ah ay ka dheceen koonfurta Soomaaliya laguna beegsaday saraakiil iyo ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab. Wararkan oo gaaraya ilaa afar war oo kala duwan ayaa saddexda todobaad ee […]
Al-Shabaab oo Xukun Dil Ah Ku Fuliyay Nin Fal Liwaad Ah Ku Kacay.
Maxkamadda maamulka islaamiga wilaayada Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku fulisay Nin geystay fal khilaafsan Shareecada Islaamka. Fagaare kuyaal deegaanka Buq Goosaar oo qiyaastii 50 KM dhanka galbeed ga beegan magaalada Beled Weyne waxaa shalay ka dhacay xukun xad ah oo lagu fuliyay nin sameeyay falkii […]
Dhacdo argagax leh ayay ciidamada Bankrafta ee ka amar qaata Maraykanka ka geysteen tuulada Yaaqdhuub oo hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose. Duhurnimadii maanta ayay ciidamadan ku duuleen dad beeraley ah oo ku sugnaa duleedka Wallaweyn xilli ay beerahooda ka shaqeysanayeen. Ugu yaraan 6 ruux oo rag ah islamarkaana […]
Mareegta Idaacadda Al-furqaan oo Dib Hawada Ugu Soo Laabatay Laba Maalin Ah Kadib.
Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan ee (Radioalfurqaan.com) ayaa caawa dib hawlaheedii u billowday kadib muddo saacado ah oo ay cilladaysnayd, waxaana ay idaacaddu bixisay raali galin ku socota dhageystayaasheeda iyo akhristayaasheeda iyagoo uga cudur daaratay mudada ay hawshu hakadka ka gashay, waxaana raali gelin kadib ay baahisay barnaamijka Dhuuxa […]
Faahfaahin Kasoo Baxaysa Khasaaraha Weerarkii Xarunta Gobolka Banaadir. (Warbixin)
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa hawl galkii qorsheysnaa ee shalay ka dhacay gudaha xarunta Visha Governo ee magaalada Muqdisho kaasoo sababay khasaarooyin baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hawl galkan oo oo si dirqi ah uga badbaaday wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa ka dhacay xarunta shirarka ee maamulka […]